646s Onye agha nke ugbua Vs Agha IIwa nke Abụọ nke Nazi - Wouldnye Ga-emeri? images and subtitles
Nazis- enwere ihe ọ bụla jọrọ njọ n’ụwa a? Ọ dị mma, ee, na nke ahụ bụ zombies ndị Nazi, mana ọ dị mma na anyị anaghị emeso zombies ọ bụla ukwu ọsọ taa. Nope, kama taa, anyị na - emeso ndị dị ndụ, na - eku ume dịgasị iche iche, na nkeji ọhụrụ anyị nke onye ga-emeri? Onye agha nke oge a ka ọ bụ Nazi Agha IIwa nke Abụọ? Datebọchị ahụ bụ 1941, agha a na Europe na-aga n'ihu na-egwu mmiri maka Adolf Hitler. France meriri, Britain batara n'obere alaeze nke agwaetiti ya, yana ihe ngosi ya imegide ndị Soviet bụ otu ihe ịga nke ọma dị egwu na-esochi. Ọ bụ oge opupu ihe ubi maka Hitler- ọbụlagodi na ọ bụ mbubreyo ọdịda- yana na blitzkrieg Obi ụtọ na onye ọchịchị Nazi na-enyocha ihe nzuzo ụlọ nyocha ndị Nazi na-ewu UFO injinia, usoro ihe omumu nke ihe omuma nke acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ nke na-acha uhie uhie, na n'ezie, oge iji weghara Einstein ma manye ya iwuru bọmbụ nuklia maka Germany. Skeptical nke nkwupụta sayensị ya kwuru na o wuru igwe oge ọrụ, Hitler na-ajụ otu n’ime ndị na-eche ya nche ka ọ nwaa ya nwaa. Hitler kwuru, "Hey, Hans, gịnị kpatara ị ga-eji sonye, ​​nye ọdịnihu dị ebube nke atọ Reich a peek, bia laghachitere bia gwa m ihe nile banyere etu ndi Nazi Germany si di egwu n'afọ 2020? ” Ọ bụghị onye ga-emechu Fuhrer ya, Hans onye Nazi banye na igwe oge German, Ka ọ na-pịa bọtịnụ, ọ na-apụ n'anya! Ọ bụ ugbu a 2020, na Hans onye Nazi eweghachila smack-dab n’etiti ndị agha Rammstein okpuru, isi ala ndi America kari oke agha na agha nke ndi NATO na Europe. Mgbe ọ bara na onye agha America, Hans chọpụtara na ọdịnihu agaala nke ukwuu adighi nma, ma ugbua o burula ochicho ahia azumahia nke nnwere onwe dika anyi na-etinye Hans onye Nazi imegide ya onye agha America nke oge a ma chọpụta onye ga-emeri. Anyị ga-akụtu nkuzi na ngwa ọrụ nke onye agha ọ bụla. ma chọpụta n'ikpeazụ onye ga-abịa n ’elu. A bịa na ọzụzụ, myirịta dị n'etiti onye agha America nke oge a na onye Nazi agha dị hiri nne. Onye agha Nazi ga-abanyerịrị na ọzụzụ izizi nke egbe eji eji egbe na ọbụna ụfọdụ ụzọ aghụghọ ụmụaka n'ihi otuto nke Ndị Ntorobịa Hitler na Nazi Germany. A gbara ụmụ nwoke ume nke ukwuu isonye na Ndị Ntorobịa Hitler tupu 14, usoro mmemme ịhụ mba n'anya Nke ahụ bụ ihe dị ka nwata Scouts na USA- naanị jiri nkwanye ike dị ukwuu na nganga nke mba, ịkpọ ndị Juu asị, ma mụta ịlụ ọgụ. Ndị agha agha ụwa nke mbụ na-agba, iwe were iwe na ọnwụ Germany ka etinyere na-eto eto ọgbọ, na Hitler enweghị nzuzu- o ji ọtụtụ afọ kwadebe ọtụtụ ụmụ-nwoke nke Germany ịghọ ndị agha. America ugbua enweghi ihe obula di otu a, otutu ndi agha agha sitere n’aka ndi a nkịtị, ndi nkiti. Ozugbo ị banyere ọzụzụ agha, ọzụzụ nke ha abụọ yiri nnọọ. Otu onye agha nazi ga-anagide izu 16 nke ọzụzụ mbụ tupu eziga ya na ngalaba ha ebe ha ga-anatakwu ọzụzụ. Onye agha anyị nke America nke oge a ga-enwetarịrị izu asatọ nke ọzụzụ iji tụgharịa site na ndi nkịtị ka onye agha, ọzọkwa izu 16 nke ụlọ akwụkwọ ụmụaka kụziere ya otu esi achị agha ọ bụla. Ndị agha Nazi nwere ọmarịcha ọzụzụ, ọzụzụ gburugburu, yana abamuru nke ndị isi agha ụwa mbụ mụta ihe site na. N’adịghị ka mba ndị ọzọ, ndị agha Nazi nwetakwara ọzụzụ maara ụdị ngwa ọgụ ndị ọzọ enwere ike itinye ya na otu ha, egbe egbe. Ọzụzụ ndị America ọgbara ọhụrụ gosipụtara n'omume a, na nwa afọ America abụghị onye ama ama jiri ngwa agha nke ihe okike ya nwere ike iburu, mana ọtụtụ mgbe, ka nwee ike iru ọtụtụ n'ime gaa gosiputara na o nwere ikike. N'ihe niile, onye agha America nke oge a nwere ahụmịhe karịa ọbụna onye pre-WWII Nazi Onye agha na-ahapụ ọzụzụ mbụ, ebe ndị ọzụzụ ndị Nazi nwere abamuru nke Agha Worldwa M ndị agha, ndị agha America ọgbara ọhụrụ nwere uru nke ndị ọzụzụ ụgbọ mmiri vetiranti ji arụ ọrụ otutu njegharị na esemokwu na Afghanistan na Iraq. Kpa ye oro mbonekọn̄ Nazi ẹma ẹkop ufọn ito akwa edumbet, ye amaara ndị manuevers ndị agha nke sitere na afọ ndị ntorobịa Hitler. A bịa na ọzụzụ, anyị ga-akpọ ya ma akụkụ abụọ, mana onye agha Nazi na afọ ndụ ya na-anụ ọkụ n'obi nọrọ na Hitler Ntorobịa ga-enweta nsọtụ karịa onye America anyị onye agha mgbe a bịara n’iru ike na njikere ịlụ ọgụ. N'aka aka anyị, ndị agha America ga-enwetakwu ọzụzụ na ọzụzụ ka mma karịa onye agha Nazi anyị. Ndị agha Nazi nwere ike ịtụ anya ịmụta ụfọdụ usoro aka na ịkụ ọkpọ, mana ọgbara ọhụrụ Ndị agha America amụọla ụzọ agha dị iche iche ọtụtụ afọ. Ihe omume agha siri ike ma kpachara anya, na mbido 2000 ndi agha US nile Ekwesịrị itinye uche n'usoro ihe omume ịgba egwu n'ihi enweghị ọzụzụ na njide ndị na-abụghị ihe ọjọọ usoro. Mgbe a bịara agha agha aka, onye agha America anyị wepụrụ elu ya, daalụ ruo ọtụtụ iri afọ nke ahụmahụ na mgbanwe nke ọzụzụ agha. Ndị agha abụọ ahụ nwere nhọrọ dịịrị ha na-abụghị aka ọkpọka ọ bụ ezie na, na mkpọda Egwuregwu, ndị agha anyị agara ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ọrụ nke abụọ a iji nweta mmeri. Onye agha Nazi anyị gaara eburu seitengewehr 98 mma / bayonet. Na-egosi agba ya dị ihe dịka 15 inch, a nwere ike itinye mma a na-egbu egbu n'ihu ihu egbe dị ka bayonet. Ndị agha America na-ejikarị mma mma, mana ọtụtụ ihe ngosi bụ njiri mara ndị America ngwaọrụ, ma ọ bụ e-tool maka mkpụmkpụ. Ebe a na -emeghe okpueze nwere mpekere dị nkọ, ihe eji eme ihe na-enye onye agha America ngwa ngwa gwuo onwe ya na-alụ ọgụ dị ala ọ bụla, kama ọ na-arụkwa ọrụ na aka na-emebi ihe n'ezie ngwa agha. Otu ihe site na ngwa e-ezuru ezu iji gbajie okpokoro isi nke onye iro mepere, ma ọ bụ wepụta mkparịta ụka na-ada isi n'isi. N’inye uru ndị doro anya nke ngwa agha na-egbu egbu na ngwa mgbagharị yiri anyụike, anyị bụ naanị na m ga-eji nke nta nye ndị agha America mmeri ebe a nanị n'ihi na n'adịghị ka ndị Nazi mma, American e-ngwá ọrụ nwekwara ike iji ghaa ngwa ọgụ ọnọdụ, enye ọ ka ịba uru na ọnọdụ ọgụ. Na nsochi, onye agha Nazi jiri akara ngosi Walther P38, ihe mmiri nke ghọrọ ihe ama ama dị ka ndị agha jikọrọ aka na -achọ ha dịka ihe ncheta nke agha. Pughi oke, P38 ka ka na-eji gburugburu ụwa, gụnyere na Afghanistan ebe ndị agha nnupụisi ejirila ha mee ihe mgbe niile megide ndị agha NATO. Na-agbapụ mgbọ 9mm, ndị P38 nwere oke ruru 50 mita, ma zie ezi iji nwee ezigbo egbe gbagburu mita 25-50. N'iji egwu dị omimi nke 320 mita na nke abụọ, ndị P38 nwere ikike nkwụsị dị egwu maka obere ya. N'inwe nanị magazin gbara okirikiri asatọ, P38 agaghị ekwe ka onye agha Nazi mee ya Jide ọkụ na ebumnuche gị ogologo oge, kama ịdabere na izi ezi karịa olu nke ọkụ. Onye agha anyị nke America gụrụ ndị Nazi P38 ọnụ na Beretta M9. Ihe kachasị amasị ndị kachasị n’egwuregwu Evil Evil, na M9 na-arụ ọrụ kemgbe 1980s. Otu ngwa agha nke atukwasiri obi, M9 na-etinye 9mm okirikiri na akwukwo iri na ise, na-enye onye agha anyị nke oge a ka ọ dị elu ịgba egbe tupu ịkwachaa ya. Ngwù agha nwere ihe dị omimi nke 381 mita kwa sekọnd, na-enye ya ohere ịbanye na ya karịa nke Nazi P38, ma nwee oke mgbụsị mgbagha karịa nke ihe agha Nazi ugboro abụọ, na 100 mita na mita 50 maka oke kachasị dị oke. Na okpukpu abụọ kachasị elu ma dị irè nke ịgbapụ ọkụ, ma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke ikike, merie ebe a doro anya na ọ bụ onye agha America nke oge a na ntụkwasị obi M9 ya. Maka itinye aka dị ogologo na ogologo oge, onye agha ndị Nazi anyị na-eburu Karabiner 98k, ọkọlọtọ tụpụtara egbe ndị agha Germany n'oge Agha IIwa nke Abụọ. Otu ihe agha kwesiri ntukwasi obi nke oma, ndi K98k weputara onodu ugbo ala site na Africa rue ndị Russia dị n'ihu ọwụwa anyanwụ, ma rụọ ọrụ dịkwa na apịtị na mmiri ozuzo dị ka snow na ice. Ngw'agha ahụ nwere caliber 7.92 mm, nke ga-eweta mbibi ma ọ bụrụ ọ kụrụ ihe mgbaru ọsọ sitere na nha ya na mpụga ọsọ nke 760 mita nke abụọ. Rifgbè ahụ nwere egbe gbachapụrụ agbachapụ ruru narị mita ise na anya nchara, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ka n’enwe telescopic n’elele anya ezi elektrik gaa 1000 mita. Ogo ya kachasị elu nke puku mita anọ na narị asaa pụtara na ọbụlagodi oke égbè nwere ike ịnwe adabaghị, ma ọ ka nwere ike bụrụ ihe na - egbu egbu ma ọ bụrụ na ogbagburu iburu daa na ebumnuche. O di nwute na obere ikike gbara obere egbe ahu nwere obere egbe, nke na enye ya enweghi ikike imechi ihe a chọrọ. Kama, German nwa ọhụrụ tụkwasịrị obi na izi ezi, yana egbe ndị eji egbe, iwepụ ndi agha ndi iro. Onye agha anyị nke America na-ewetara M4 Carbine ntụkwasị obi ya na ọgụ a. N'agbanyeghị asịrị megidere nke ahụ, M4 na-eme nke ọma n'ọtụtụ ebe dị iche iche, na onye ọbụla jirila otu na ngalaba - kama ịgụ banyere ya na ịntanetị isiokwu- maara na égbè enweghị nsogbu ịgbagbu ọ bụrụgodị na-eji ya na unyi na unyi. Ebe egbe gbagotere ntakịrị nọ na nkwụsị ike, ebe ọ na-emegharị okirikiri 5.56 N'ime akwụkwọ ọgbụgba iri atọ nke ogologo oge akpọla ndị ọrụ ya na-ezughi oke maka inyefe ike nkwụsị zuru oke maka igbu mmadụ gburugburu. Agbanyeghị, ọgịrịga ọgịrịga ya nwere mita 910 nke abụọ tinyere ngbanye ígwè na-enye ya nnukwu arụmọrụ megide ngwa agha. Uzo ya kacha di nma nke 500 mita maka ebum n’uzo, na 600 mita maka ogha gbadoro ukwu ya iru. Ọzọkwa, M4 na-enye ikike ọkụ ịhọrọ, na-eme ka onye ọrụ ya gbaa otu ọkụ agba maka ọkụ ziri ezi ogologo, ma ọ bụ mgbada atọ nke ọgụ dị nso maka ọgụ. A bịa n’oghere, a na-ejikọ égbè abụọ ahụ na ha abụọ nwere ike ịke uru ọ bụla maka isi- maọbụ mmadụ mmadụ chọrọ iru 500 mita jiri naanị ebe nlegharị anya ígwè. Ndị agha anyị agaghị agha ịlụ ọgụ karịa nke ọ bụla site na ibe ha, yabụ gafere nke a abaghị uru ọ bụla, ọ ga-esikwa ike ịhụ ebumnuche gị. K98k karịrị M-4 ya na okirikiri ka ukwuu, nke ga-emebi ihe na nso na ọkara usoro. Agbanyeghị, na a obere ala mucks ike karịa M-4, nkwụba nke nnukwu gburugburu ọ ga-agbada ma nwekwa ike iwere njem ahụ ruo na nke mbụ ma ọ bụ abụọ ga-akwụsị ngwa ngwa site ọkọlọtọ ahụ agha na-ebu site American nwa na na otutu akara. Site na ntụle, ikike akwụkwọ ọgụgụ ka ukwuu na ọnụego ngwa ngwa ngwa ngwa nke M-4 na-enye Onye agha America nke oge a bụ uru na-enweghị atụ na ọgụ ọkụ, yana ikike gbanye ọkụ ọgbụgba gburugburu atọ maka ọgụ ọgụ n'akụkụ. Ike iwepụta okirikiri atọ na-agbawa obi na ịpịgharị pụtara na nso-nso M4 na-egbochi K98k, mana site na iji akwụkwọ ọgụgụ ya dị elu na ọnụego ịgba egbe M-4 abịa si na elu na ọkara ruo ogologo nke oke. Ọ bụrụ na onye agha Nazi anyị nwere oge nlegharị anya na oge ọ bụla, onye America anyị nwa nwa ka nma imechi anya ka odi nso, n'ihi na K98k nwere ike nye izi ezi Ọkụ na M4 enweghị ike imetụ aka. Na nso usoro oke, anyị na-enye ndị agha America ọgbara ọhụrụ mmeri. Ma n'agbata oke ogologo, mmeri ahụ na-adịrịrị onye agha Nazi na ike ya iru na iru mmadụ aka ruo na yaarị 1000 site na ezigbo eziokwu. Na njedebe, Nazi anyị na-eme njem oge niile nwere ọfụma na ekele nke anụ ahụ na nke uche ruo afọ ya nọrọ na mmemme ọzụzụ ndị ntorobịa nke obodo Hitler, ma nwee uru n’ọkụ gbara oke ogologo maka ịdị mma na oke nke egbe K98k. Agbanyeghị na mpaghara ọ bụla ọzọ, ndị agha America nke oge a na-achịkwa, n'ihi mgbanwe n'ime usoro ọzụzụ n'ime afọ 80 gara aga ma kwalitere akụrụngwa ọgbara ọhụrụ. Ma eleghị anya, ị ga-ekwenye - ọ bụ nke mmadụ abụọ ka ị chere ga-enweta mmeri na otu ịlụ ọgụ ruo ọnwụ? Mee ka anyị mara na nkwupụta, yana ugbu a ị nọ na njedebe, gịnị kpatara ị ga-eji lelee anya ndị ọzọ na-aga site na ịpị vidiyo ebe a, ma ọ bụ ikekwe ị ga - achọ ịnọ ebe a kama ?! Mee ọsọ ọsọ wee pịa otu, n'adịghị ka ndị agha anyị taa - ị nweghị ike ida!
Onye agha nke ugbua Vs Agha IIwa nke Abụọ nke Nazi - Wouldnye Ga-emeri?
< start="0.329" dur="3.271"> Nazis- enwere ihe ọ bụla jọrọ njọ n’ụwa a? >
< start="3.6" dur="5.32"> Ọ dị mma, ee, na nke ahụ bụ zombies ndị Nazi, mana ọ dị mma na anyị anaghị emeso zombies ọ bụla ukwu ọsọ >
< start="8.92" dur="1"> taa. >
< start="9.92" dur="3.36"> Nope, kama taa, anyị na - emeso ndị dị ndụ, na - eku ume dịgasị iche iche, na nkeji ọhụrụ anyị >
< start="13.28" dur="1"> nke onye ga-emeri? >
< start="14.28" dur="2.91"> Onye agha nke oge a ka ọ bụ Nazi Agha IIwa nke Abụọ? >
< start="17.19" dur="4.36"> Datebọchị ahụ bụ 1941, agha a na Europe na-aga n'ihu na-egwu mmiri maka Adolf Hitler. >
< start="21.55" dur="4.27"> France meriri, Britain batara n'obere alaeze nke agwaetiti ya, yana ihe ngosi ya >
< start="25.82" dur="3.31"> imegide ndị Soviet bụ otu ihe ịga nke ọma dị egwu na-esochi. >
< start="29.13" dur="4.24"> Ọ bụ oge opupu ihe ubi maka Hitler- ọbụlagodi na ọ bụ mbubreyo ọdịda- yana na blitzkrieg >
< start="33.37" dur="5.17"> Obi ụtọ na onye ọchịchị Nazi na-enyocha ihe nzuzo ụlọ nyocha ndị Nazi na-ewu UFO injinia, >
< start="38.54" dur="4.47"> usoro ihe omumu nke ihe omuma nke acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ nke na-acha uhie uhie, na n'ezie, oge >
< start="43.01" dur="4.25"> iji weghara Einstein ma manye ya iwuru bọmbụ nuklia maka Germany. >
< start="47.26" dur="4.37"> Skeptical nke nkwupụta sayensị ya kwuru na o wuru igwe oge ọrụ, Hitler na-ajụ >
< start="51.63" dur="1.94"> otu n’ime ndị na-eche ya nche ka ọ nwaa ya nwaa. >
< start="53.57" dur="3.64"> Hitler kwuru, "Hey, Hans, gịnị kpatara ị ga-eji sonye, ​​nye ọdịnihu dị ebube nke atọ >
< start="57.21" dur="3.8"> Reich a peek, bia laghachitere bia gwa m ihe nile banyere etu ndi Nazi Germany si di egwu >
< start="61.01" dur="1.65"> n'afọ 2020? ” >
< start="62.66" dur="4.3"> Ọ bụghị onye ga-emechu Fuhrer ya, Hans onye Nazi banye na igwe oge German, >
< start="66.96" dur="2.74"> Ka ọ na-pịa bọtịnụ, ọ na-apụ n'anya! >
< start="69.7" dur="5.43"> Ọ bụ ugbu a 2020, na Hans onye Nazi eweghachila smack-dab n’etiti ndị agha Rammstein >
< start="75.13" dur="5.03"> okpuru, isi ala ndi America kari oke agha na agha nke ndi NATO na Europe. >
< start="80.16" dur="4.68"> Mgbe ọ bara na onye agha America, Hans chọpụtara na ọdịnihu agaala nke ukwuu >
< start="84.84" dur="5.17"> adighi nma, ma ugbua o burula ochicho ahia azumahia nke nnwere onwe dika anyi na-etinye Hans onye Nazi imegide ya >
< start="90.01" dur="3.1"> onye agha America nke oge a ma chọpụta onye ga-emeri. >
< start="93.11" dur="4.14"> Anyị ga-akụtu nkuzi na ngwa ọrụ nke onye agha ọ bụla. >
< start="97.25" dur="2.62"> ma chọpụta n'ikpeazụ onye ga-abịa n ’elu. >
< start="99.87" dur="4.26"> A bịa na ọzụzụ, myirịta dị n'etiti onye agha America nke oge a na onye Nazi >
< start="104.13" dur="1.01"> agha dị hiri nne. >
< start="105.14" dur="4.269"> Onye agha Nazi ga-abanyerịrị na ọzụzụ izizi nke egbe eji eji egbe >
< start="109.409" dur="5.121"> na ọbụna ụfọdụ ụzọ aghụghọ ụmụaka n'ihi otuto nke Ndị Ntorobịa Hitler na Nazi Germany. >
< start="114.53" dur="5.06"> A gbara ụmụ nwoke ume nke ukwuu isonye na Ndị Ntorobịa Hitler tupu 14, usoro mmemme ịhụ mba n'anya >
< start="119.59" dur="4.19"> Nke ahụ bụ ihe dị ka nwata Scouts na USA- naanị jiri nkwanye ike dị ukwuu >
< start="123.78" dur="3.19"> na nganga nke mba, ịkpọ ndị Juu asị, ma mụta ịlụ ọgụ. >
< start="126.97" dur="4.48"> Ndị agha agha ụwa nke mbụ na-agba, iwe were iwe na ọnwụ Germany ka etinyere na-eto eto >
< start="131.45" dur="5.03"> ọgbọ, na Hitler enweghị nzuzu- o ji ọtụtụ afọ kwadebe ọtụtụ ụmụ-nwoke nke Germany >
< start="136.48" dur="1.66"> ịghọ ndị agha. >
< start="138.14" dur="4.55"> America ugbua enweghi ihe obula di otu a, otutu ndi agha agha sitere n’aka ndi a >
< start="142.69" dur="1.57"> nkịtị, ndi nkiti. >
< start="144.26" dur="3.9"> Ozugbo ị banyere ọzụzụ agha, ọzụzụ nke ha abụọ yiri nnọọ. >
< start="148.16" dur="4.56"> Otu onye agha nazi ga-anagide izu 16 nke ọzụzụ mbụ tupu eziga ya na ngalaba ha ebe >
< start="152.72" dur="1.73"> ha ga-anatakwu ọzụzụ. >
< start="154.45" dur="3.81"> Onye agha anyị nke America nke oge a ga-enwetarịrị izu asatọ nke ọzụzụ iji tụgharịa >
< start="158.26" dur="4.74"> site na ndi nkịtị ka onye agha, ọzọkwa izu 16 nke ụlọ akwụkwọ ụmụaka >
< start="163" dur="2.53"> kụziere ya otu esi achị agha ọ bụla. >
< start="165.53" dur="5.039"> Ndị agha Nazi nwere ọmarịcha ọzụzụ, ọzụzụ gburugburu, yana abamuru nke ndị isi agha ụwa mbụ >
< start="170.569" dur="1.181"> mụta ihe site na. >
< start="171.75" dur="4.48"> N’adịghị ka mba ndị ọzọ, ndị agha Nazi nwetakwara ọzụzụ maara ụdị ngwa ọgụ ndị ọzọ >
< start="176.23" dur="3.25"> enwere ike itinye ya na otu ha, egbe egbe. >
< start="179.48" dur="4.79"> Ọzụzụ ndị America ọgbara ọhụrụ gosipụtara n'omume a, na nwa afọ America abụghị onye ama ama >
< start="184.27" dur="4.21"> jiri ngwa agha nke ihe okike ya nwere ike iburu, mana ọtụtụ mgbe, ka nwee ike iru ọtụtụ n'ime gaa >
< start="188.48" dur="1.08"> gosiputara na o nwere ikike. >
< start="189.56" dur="5.25"> N'ihe niile, onye agha America nke oge a nwere ahụmịhe karịa ọbụna onye pre-WWII Nazi >
< start="194.81" dur="4.31"> Onye agha na-ahapụ ọzụzụ mbụ, ebe ndị ọzụzụ ndị Nazi nwere abamuru nke Agha Worldwa >
< start="199.12" dur="4.03"> M ndị agha, ndị agha America ọgbara ọhụrụ nwere uru nke ndị ọzụzụ ụgbọ mmiri vetiranti ji arụ ọrụ >
< start="203.15" dur="3.02"> otutu njegharị na esemokwu na Afghanistan na Iraq. >
< start="206.17" dur="4.211"> Kpa ye oro mbonekọn̄ Nazi ẹma ẹkop ufọn ito akwa edumbet, ye >
< start="210.381" dur="4.619"> amaara ndị manuevers ndị agha nke sitere na afọ ndị ntorobịa Hitler. >
< start="215" dur="4.04"> A bịa na ọzụzụ, anyị ga-akpọ ya ma akụkụ abụọ, mana onye agha Nazi >
< start="219.04" dur="4.41"> na afọ ndụ ya na-anụ ọkụ n'obi nọrọ na Hitler Ntorobịa ga-enweta nsọtụ karịa onye America anyị >
< start="223.45" dur="2.71"> onye agha mgbe a bịara n’iru ike na njikere ịlụ ọgụ. >
< start="226.16" dur="4.56"> N'aka aka anyị, ndị agha America ga-enwetakwu ọzụzụ na ọzụzụ ka mma >
< start="230.72" dur="1.48"> karịa onye agha Nazi anyị. >
< start="232.2" dur="4.21"> Ndị agha Nazi nwere ike ịtụ anya ịmụta ụfọdụ usoro aka na ịkụ ọkpọ, mana ọgbara ọhụrụ >
< start="236.41" dur="3.94"> Ndị agha America amụọla ụzọ agha dị iche iche ọtụtụ afọ. >
< start="240.35" dur="5.04"> Ihe omume agha siri ike ma kpachara anya, na mbido 2000 ndi agha US nile >
< start="245.39" dur="5.179"> Ekwesịrị itinye uche n'usoro ihe omume ịgba egwu n'ihi enweghị ọzụzụ na njide ndị na-abụghị ihe ọjọọ >
< start="250.569" dur="1"> usoro. >
< start="251.569" dur="3.911"> Mgbe a bịara agha agha aka, onye agha America anyị wepụrụ elu ya, daalụ >
< start="255.48" dur="3.619"> ruo ọtụtụ iri afọ nke ahụmahụ na mgbanwe nke ọzụzụ agha. >
< start="259.099" dur="4.581"> Ndị agha abụọ ahụ nwere nhọrọ dịịrị ha na-abụghị aka ọkpọka ọ bụ ezie na, na mkpọda >
< start="263.68" dur="4.419"> Egwuregwu, ndị agha anyị agara ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ọrụ nke abụọ a iji nweta mmeri. >
< start="268.099" dur="4.111"> Onye agha Nazi anyị gaara eburu seitengewehr 98 mma / bayonet. >
< start="272.21" dur="4.01"> Na-egosi agba ya dị ihe dịka 15 inch, a nwere ike itinye mma a na-egbu egbu n'ihu ihu >
< start="276.22" dur="1.749"> egbe dị ka bayonet. >
< start="277.969" dur="4.44"> Ndị agha America na-ejikarị mma mma, mana ọtụtụ ihe ngosi bụ njiri mara ndị America >
< start="282.409" dur="1.69"> ngwaọrụ, ma ọ bụ e-tool maka mkpụmkpụ. >
< start="284.099" dur="5.011"> Ebe a na -emeghe okpueze nwere mpekere dị nkọ, ihe eji eme ihe na-enye onye agha America ngwa ngwa >
< start="289.11" dur="5.07"> gwuo onwe ya na-alụ ọgụ dị ala ọ bụla, kama ọ na-arụkwa ọrụ na aka na-emebi ihe n'ezie >
< start="294.18" dur="1"> ngwa agha. >
< start="295.18" dur="3.93"> Otu ihe site na ngwa e-ezuru ezu iji gbajie okpokoro isi nke onye iro mepere, ma ọ bụ wepụta >
< start="299.11" dur="3.229"> mkparịta ụka na-ada isi n'isi. >
< start="302.339" dur="4.63"> N’inye uru ndị doro anya nke ngwa agha na-egbu egbu na ngwa mgbagharị yiri anyụike, anyị bụ >
< start="306.969" dur="4.95"> naanị na m ga-eji nke nta nye ndị agha America mmeri ebe a nanị n'ihi na n'adịghị ka ndị Nazi >
< start="311.919" dur="4.15"> mma, American e-ngwá ọrụ nwekwara ike iji ghaa ngwa ọgụ ọnọdụ, enye >
< start="316.069" dur="2.84"> ọ ka ịba uru na ọnọdụ ọgụ. >
< start="318.909" dur="5.4"> Na nsochi, onye agha Nazi jiri akara ngosi Walther P38, ihe mmiri nke ghọrọ ihe ama ama >
< start="324.309" dur="3.461"> dị ka ndị agha jikọrọ aka na -achọ ha dịka ihe ncheta nke agha. >
< start="327.77" dur="4.269"> Pughi oke, P38 ka ka na-eji gburugburu ụwa, gụnyere na Afghanistan ebe >
< start="332.039" dur="3.59"> ndị agha nnupụisi ejirila ha mee ihe mgbe niile megide ndị agha NATO. >
< start="335.629" dur="4.801"> Na-agbapụ mgbọ 9mm, ndị P38 nwere oke ruru 50 mita, ma zie ezi >
< start="340.43" dur="3.43"> iji nwee ezigbo egbe gbagburu mita 25-50. >
< start="343.86" dur="5.33"> N'iji egwu dị omimi nke 320 mita na nke abụọ, ndị P38 nwere ikike nkwụsị dị egwu maka >
< start="349.19" dur="1.279"> obere ya. >
< start="350.469" dur="4.521"> N'inwe nanị magazin gbara okirikiri asatọ, P38 agaghị ekwe ka onye agha Nazi mee ya >
< start="354.99" dur="5.399"> Jide ọkụ na ebumnuche gị ogologo oge, kama ịdabere na izi ezi karịa olu nke >
< start="360.389" dur="1"> ọkụ. >
< start="361.389" dur="3.691"> Onye agha anyị nke America gụrụ ndị Nazi P38 ọnụ na Beretta M9. >
< start="365.08" dur="5.079"> Ihe kachasị amasị ndị kachasị n’egwuregwu Evil Evil, na M9 na-arụ ọrụ kemgbe 1980s. >
< start="370.159" dur="5.48"> Otu ngwa agha nke atukwasiri obi, M9 na-etinye 9mm okirikiri na akwukwo iri na ise, na-enye >
< start="375.639" dur="3.691"> onye agha anyị nke oge a ka ọ dị elu ịgba egbe tupu ịkwachaa ya. >
< start="379.33" dur="5.199"> Ngwù agha nwere ihe dị omimi nke 381 mita kwa sekọnd, na-enye ya ohere ịbanye na ya >
< start="384.529" dur="5.85"> karịa nke Nazi P38, ma nwee oke mgbụsị mgbagha karịa nke ihe agha Nazi ugboro abụọ, na 100 >
< start="390.379" dur="3.051"> mita na mita 50 maka oke kachasị dị oke. >
< start="393.43" dur="4.34"> Na okpukpu abụọ kachasị elu ma dị irè nke ịgbapụ ọkụ, ma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke ikike, >
< start="397.77" dur="4.289"> merie ebe a doro anya na ọ bụ onye agha America nke oge a na ntụkwasị obi M9 ya. >
< start="402.059" dur="5.381"> Maka itinye aka dị ogologo na ogologo oge, onye agha ndị Nazi anyị na-eburu Karabiner 98k, ọkọlọtọ >
< start="407.44" dur="2.9"> tụpụtara egbe ndị agha Germany n'oge Agha IIwa nke Abụọ. >
< start="410.34" dur="5.309"> Otu ihe agha kwesiri ntukwasi obi nke oma, ndi K98k weputara onodu ugbo ala site na Africa rue >
< start="415.649" dur="5.04"> ndị Russia dị n'ihu ọwụwa anyanwụ, ma rụọ ọrụ dịkwa na apịtị na mmiri ozuzo dị ka snow na ice. >
< start="420.689" dur="5"> Ngw'agha ahụ nwere caliber 7.92 mm, nke ga-eweta mbibi ma ọ bụrụ >
< start="425.689" dur="4.591"> ọ kụrụ ihe mgbaru ọsọ sitere na nha ya na mpụga ọsọ nke 760 mita nke abụọ. >
< start="430.28" dur="4.219"> Rifgbè ahụ nwere egbe gbachapụrụ agbachapụ ruru narị mita ise na anya nchara, n'agbanyeghị na ọ nwere ike >
< start="434.499" dur="4.051"> ka n’enwe telescopic n’elele anya ezi elektrik gaa 1000 mita. >
< start="438.55" dur="4.959"> Ogo ya kachasị elu nke puku mita anọ na narị asaa pụtara na ọbụlagodi oke égbè nwere ike ịnwe >
< start="443.509" dur="4.53"> adabaghị, ma ọ ka nwere ike bụrụ ihe na - egbu egbu ma ọ bụrụ na ogbagburu iburu daa na ebumnuche. >
< start="448.039" dur="4.74"> O di nwute na obere ikike gbara obere egbe ahu nwere obere egbe, nke na enye ya enweghi ikike >
< start="452.779" dur="1.47"> imechi ihe a chọrọ. >
< start="454.249" dur="4.72"> Kama, German nwa ọhụrụ tụkwasịrị obi na izi ezi, yana egbe ndị eji egbe, iwepụ >
< start="458.969" dur="1.23"> ndi agha ndi iro. >
< start="460.199" dur="3.55"> Onye agha anyị nke America na-ewetara M4 Carbine ntụkwasị obi ya na ọgụ a. >
< start="463.749" dur="4.88"> N'agbanyeghị asịrị megidere nke ahụ, M4 na-eme nke ọma n'ọtụtụ ebe dị iche iche, >
< start="468.629" dur="4.57"> na onye ọbụla jirila otu na ngalaba - kama ịgụ banyere ya na ịntanetị >
< start="473.199" dur="5.25"> isiokwu- maara na égbè enweghị nsogbu ịgbagbu ọ bụrụgodị na-eji ya na unyi na unyi. >
< start="478.449" dur="4.62"> Ebe egbe gbagotere ntakịrị nọ na nkwụsị ike, ebe ọ na-emegharị okirikiri 5.56 >
< start="483.069" dur="4.71"> N'ime akwụkwọ ọgbụgba iri atọ nke ogologo oge akpọla ndị ọrụ ya na-ezughi oke >
< start="487.779" dur="3.36"> maka inyefe ike nkwụsị zuru oke maka igbu mmadụ gburugburu. >
< start="491.139" dur="5.721"> Agbanyeghị, ọgịrịga ọgịrịga ya nwere mita 910 nke abụọ tinyere ngbanye ígwè >
< start="496.86" dur="2.759"> na-enye ya nnukwu arụmọrụ megide ngwa agha. >
< start="499.619" dur="5.44"> Uzo ya kacha di nma nke 500 mita maka ebum n’uzo, na 600 mita maka ogha >
< start="505.059" dur="2.181"> gbadoro ukwu ya iru. >
< start="507.24" dur="4.509"> Ọzọkwa, M4 na-enye ikike ọkụ ịhọrọ, na-eme ka onye ọrụ ya gbaa otu ọkụ >
< start="511.749" dur="4.931"> agba maka ọkụ ziri ezi ogologo, ma ọ bụ mgbada atọ nke ọgụ dị nso maka ọgụ. >
< start="516.68" dur="4.31"> A bịa n’oghere, a na-ejikọ égbè abụọ ahụ na ha abụọ nwere ike ịke uru ọ bụla >
< start="520.99" dur="4.96"> maka isi- maọbụ mmadụ mmadụ chọrọ iru 500 mita jiri naanị ebe nlegharị anya ígwè. >
< start="525.95" dur="3.76"> Ndị agha anyị agaghị agha ịlụ ọgụ karịa nke ọ bụla site na ibe ha, yabụ >
< start="529.71" dur="4.17"> gafere nke a abaghị uru ọ bụla, ọ ga-esikwa ike ịhụ ebumnuche gị. >
< start="533.88" dur="5.01"> K98k karịrị M-4 ya na okirikiri ka ukwuu, nke ga-emebi ihe na nso >
< start="538.89" dur="1.19"> na ọkara usoro. >
< start="540.08" dur="4.36"> Agbanyeghị, na a obere ala mucks ike karịa M-4, nkwụba nke nnukwu gburugburu >
< start="544.44" dur="4.21"> ọ ga-agbada ma nwekwa ike iwere njem ahụ ruo na nke mbụ ma ọ bụ >
< start="548.65" dur="4.68"> abụọ ga-akwụsị ngwa ngwa site ọkọlọtọ ahụ agha na-ebu site American nwa na na >
< start="553.33" dur="1.2"> otutu akara. >
< start="554.53" dur="4.47"> Site na ntụle, ikike akwụkwọ ọgụgụ ka ukwuu na ọnụego ngwa ngwa ngwa ngwa nke M-4 na-enye >
< start="559" dur="4.41"> Onye agha America nke oge a bụ uru na-enweghị atụ na ọgụ ọkụ, yana ikike >
< start="563.41" dur="2.98"> gbanye ọkụ ọgbụgba gburugburu atọ maka ọgụ ọgụ n'akụkụ. >
< start="566.39" dur="4.49"> Ike iwepụta okirikiri atọ na-agbawa obi na ịpịgharị pụtara na nso-nso >
< start="570.88" dur="5.33"> M4 na-egbochi K98k, mana site na iji akwụkwọ ọgụgụ ya dị elu na ọnụego ịgba egbe M-4 abịa >
< start="576.21" dur="2.98"> si na elu na ọkara ruo ogologo nke oke. >
< start="579.19" dur="4.54"> Ọ bụrụ na onye agha Nazi anyị nwere oge nlegharị anya na oge ọ bụla, onye America anyị >
< start="583.73" dur="4.13"> nwa nwa ka nma imechi anya ka odi nso, n'ihi na K98k nwere ike nye izi ezi >
< start="587.86" dur="2.83"> Ọkụ na M4 enweghị ike imetụ aka. >
< start="590.69" dur="4.02"> Na nso usoro oke, anyị na-enye ndị agha America ọgbara ọhụrụ mmeri. >
< start="594.71" dur="4.59"> Ma n'agbata oke ogologo, mmeri ahụ na-adịrịrị onye agha Nazi na ike ya >
< start="599.3" dur="4.49"> iru na iru mmadụ aka ruo na yaarị 1000 site na ezigbo eziokwu. >
< start="603.79" dur="4.55"> Na njedebe, Nazi anyị na-eme njem oge niile nwere ọfụma na ekele nke anụ ahụ na nke uche >
< start="608.34" dur="4.57"> ruo afọ ya nọrọ na mmemme ọzụzụ ndị ntorobịa nke obodo Hitler, ma nwee uru >
< start="612.91" dur="5.12"> n’ọkụ gbara oke ogologo maka ịdị mma na oke nke egbe K98k. >
< start="618.03" dur="4.48"> Agbanyeghị na mpaghara ọ bụla ọzọ, ndị agha America nke oge a na-achịkwa, n'ihi mgbanwe >
< start="622.51" dur="4.71"> n'ime usoro ọzụzụ n'ime afọ 80 gara aga ma kwalitere akụrụngwa ọgbara ọhụrụ. >
< start="627.22" dur="4.54"> Ma eleghị anya, ị ga-ekwenye - ọ bụ nke mmadụ abụọ ka ị chere ga-enweta mmeri na otu >
< start="631.76" dur="1.19"> ịlụ ọgụ ruo ọnwụ? >
< start="632.95" dur="3.55"> Mee ka anyị mara na nkwupụta, yana ugbu a ị nọ na njedebe, gịnị kpatara ị ga-eji lelee anya >
< start="636.5" dur="4.93"> ndị ọzọ na-aga site na ịpị vidiyo ebe a, ma ọ bụ ikekwe ị ga - achọ ịnọ ebe a >
< start="641.43" dur="1"> kama ?! >
< start="642.43" dur="3.13"> Mee ọsọ ọsọ wee pịa otu, n'adịghị ka ndị agha anyị taa - ị nweghị ike ida! >